CANADA IMMIGRATION ဆိုင်ရာများ (၁)
February 17, 2009 04:00
Last week, immigration lawyers discovered that the form used by foreign nationals for an extension of their stay in Canada (Form IMM1249) contains some new and disturbing language. The new form readily acknowledges that by virtue of Canada’s Privacy Act “individuals have the right to protection of and access to their personal information.” Nonetheless, the form declares that the applicant’s personal information may be shared not only with the CBSA, the RCMP and CSIS but also with any “foreign governments.”
Given the significant privacy rights at stake by this development I contacted Ann-Marie Hayden,media relations officer for Canada’s Privacy Commissioner, who confirmed that her office was not consulted prior to the development of this dubious initiative.
February 09, 2009 04:00
January 19, 2009 07:00
February 02, 2009 04:00
January 05, 2009 08:00
December 28, 2008 06:42
December 07, 2008 11:45
December 21, 2008 08:21
November 16, 2008 11:47
November 09, 2008 11:50
October 27, 2008 03:56
October 19, 2008 08:50
October 05, 2008 09:59
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/09/2009 1 အကြံပြုခြင်း
“ရယက လာခေါ်တာကတော့ အစည်းအဝေးတက်ဖို့ပဲ၊ ဘာအတွက်လဲဆိုတာတော့ ပြောမသွားဘူး၊ ဟိုရောက်တော့မှ မီးစက်ဝယ်ခိုင်းတယ်၊ သူတို့ပြောတော့ တစ်ပတ်အတွင်းဝယ်ရမယ်၊ အဆောင်မှာ မီးစက်မရှိလို့ ကျောင်းသားတွေ အခက်အခဲဖြစ်တာ၊ ကျောင်းသားဆန္ဒပြတဲ့ အကြောင်းက အဆောင်ပိုင်ရှင်ကို ပုံချပြီးပြောတယ်၊ ဒါကြောင့် ရပ်ကွက်လူကြီးက အတင်းအဓမ္မဝယ်ခိုင်းတယ်” ဟု အမျိုးသား အဆောင်ပိုင်ရှင်တဦးက ပြောသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/09/20090အကြံပြုခြင်း
ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေး။
Publish at Scribd or explore others: Other Burma
ရှင်သန်နေသည့် သမိုင်းထဲမှ ‘သူတို့တတွေ’
ကျနော် အမေရိကန်နိုင်ငံကို ရောက်တဲ့အခါ၊ အစစအရာရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံထက် အဆင်ပြေတာတွေကို ကြုံတွေ့၊ ခံစားရပါတယ်။ သာမန် အခြေခံကိစ္စလေးတွေဖြစ်တဲ့ စားရေး သောက်ရေး၊ သွားရေး၊ လာရေးတွေပါ။
အစားအသောက်ဆိုရင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ စာရင် တကယ့်ကို အလျံအပယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မစားရခဲ့သမျှ ပုဇွန်ထုပ်ကြီးတွေကို ဒီမှာ အတိုးချပြီးတော့ကို စားပစ်လိုက်တယ်။
ခရစ်ယာန်တို့ရဲ့ သမ္မာကျမ်းစာထဲက အဆိုဖြစ်တဲ့ “နို့နှင့်ပျားရည်၊ စီးဆင်းသောနိုင်ငံ” လို့တောင် ခေါ်ရမလို။
ဒါပေမယ့် ဒီ အမေရိကန်ကန်နိုင်ငံမှာလည်း အခက်အခဲ၊ လူမှုဒုက္ခ၊ စိန်ခေါ်မှု အသစ်တွေ ကလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်။ ပြဿနာအသစ်တွေကလည်း သမ္မတအသစ် မစ္စတာအိုဘားမား ဖြေရှင်းပေးဖို့ တသီတတန်းကြီး စောင့်နေတယ်။
အလုပ်လက်မဲ့ ပြဿနာ၊ လောင်စာဆီ ပြဿနာ၊ အီရတ်၊ အာဖဂန်နစ္စတန် တို့မှာ စစ်မျက်နှာ ဖွင့်ထားတာတွေကို ဘယ်လို အဖြေရှာကြမလဲ။
အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လို့ တခြားနိုင်ငံငယ်လေးတွေရဲ့ ဒုက္ခတွေကို လူအင်အား၊ ငွေကြေးအင်အားတွေနဲ့ ပုံအောပြီး ကူညီ နေပေမယ့် ကိုယ့်အိမ်တွင်းရေး ဒါမှမဟုတ် ပြည်တွင်းရေးကိစ္စကိုလည်း အလေးထားပြီး ဖြေရှင်းပေးဖို့ အတိုက်ခံတွေ၊ မီဒီယာတွေက တစာစာအော်နေတဲ့အချိန်။
ဒီလို အခါသမယမှာ ကျနော် အမေရိကန်နိုင်ငံကို ရောက်ရှိခြင်းပါ။ အကောင်းဘက်က တွက်ကြည့်တော့ ဆင်ပိန်ရင်လည်း ကျွဲလောက်တော့ရှိပါသေးတယ်ပေါ့။
အသေအချာ၊ ပြောနိုင်တာတခုကတော့၊ စားရေး သောက်ရေး၊ နေရေး၊ ထိုင်ရေးမှာ ကျနော့်လို နိုင်ငံရေး ခိုလှုံခွင့် ရရှိထားသူအတွက် အရမ်းကို အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီကိုရောက်ပြီး သုံးလအကြာမှာ ကျနော် အလုပ် တခု ရပါတယ်။
ကြော်ငြာပစ္စည်းတွေ၊ ဆိုင်းဘုတ်တွေကို စုသိမ်းပြီး ထုပ်ပိုးရတဲ့ အလုပ်ပါ။ ကုမ္ပဏီလူကြီးတွေက ကျနော် အပါအဝင် အလုပ်ခန့်လိုက်တဲ့ လူသစ် ငါးဦးကို စားသောက်ဆိုင်တဆိုင်မှာ နေ့လည်စာ လိုက်ကျွေးပါတယ်။
အမေရိကန်တွေရဲ့ ကြားထဲမှာ အာရှသား၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဇာတိက ကျနော်တယောက်သာ။ စားသောက်ဆိုင်အတွင်း စားဖွယ်ရာများ အမျိုးစုံစုံလင်လင်ကို တည်ခင်းထားတာကို မြင်ပြီး ရင်ထဲက လှိုက်ကာ လှိုက်ကာ ဝမ်းနည်း ဆို့နင့်မှုတခုကို ရုတ်ချည်းဆိုသလို၊ ခံစားလိုက်ရပါတယ်။
“သြော် ငါ့မှာတော့ အခု အလုပ်ရတော့မယ်၊ လုပ်ခ ရမယ်၊ ပြီးတော့ အစားအသောက်ကောင်းတွေလည်း စားသောက်လို့ သူတို့တတွေမှာတော့ အချုပ်အနှောင် အကာအရံ တွေရဲ့ အလယ် အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ရှိနေဆဲပါလား” လို့ တွေးပြီး၊ ဝမ်းနည်းမိခြင်းပါ။
“သူတိုတတွေဆိုတာကတော့” ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုက်ိုကြီး၊ ကိုမြအေး၊ ကိုဂျင်မီ၊ ကိုပြုံးချို၊ ကိုမာကီး တို့ အပါအဝင် ရှစ်ဆယ့်ရှစ် မျိုးဆက်က ကျနော့်ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေပါ။
၂ဝဝ၄ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ ကိုမင်းကိုနိုင် ၁၆နှစ်လုံးလုံး အထိန်းသိမ်းခံထားရပြီး ထောင်ထဲကနေ ပြန်လွှတ်လာတုန်းက ကျနော် သူ့ကို သတင်းဓာတ်ပုံ ရိုက်ခဲ့တာပါ။ ကိုကိုကြီးတုန်းကလည်း ကျနော်။သူတို့တတွေကို ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လအတွင်း ပြန်လည် မထိမ်းသိမ်းမီ ကာလအထိ၊ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်မျိုးဆက်တွေရဲ့ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုတွေကို တောက်လျှောက် ဓာတ်ပုံ သတင်း မှတ်တမ်း ရိုက်ခဲ့တာကလည်း ကျနော်။
ပြင်သစ်သတင်းဌာန AFP နဲ့ ဥရောပ ဓာတ်ပုံသတင်း ဌာန EPA တို့အတွက် ကျနော် ဓာတ်ပုံသတင်းထောက် အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေစဉ် လေးနှစ်ကျော်ကျော်ကာလအတွင်း ဒီရှစ်ဆယ့်ရှစ် မျိုးဆက်က ရဲဘော်တွေနဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်ရခြင်းပါ။
အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင် သူတို့တတွေကို ဓာတ်ပုံ သတင်းထောက် တယောက်အနေနဲ့ အလုပ်သဘောအရ ပတ်သက်ခြင်းထက် သူတို့ရဲ့ စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံမှုများကို လေးစားပြီး သံယောဇဉ် တွယ်မိခဲ့ခြင်းပါပဲ။
သတင်းထောက်တွေရဲ့ကျင့်ဝတ်အရ ဘက်မလိုက်ရဘဲ တတိယလူ သတင်းယူသူတယောက် အဖြစ်ပဲ ရပ်တည်ရမယ်ဆိုတာ ကျနော်သိပါတယ်။
သူတို့တတွေရဲ့ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး လှုပ်ရှားမှု၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုများကို ကျနော့်ရဲ့သတင်း ဓာတ်ပုံကနေတဆင့် ကမ္ဘာက သိအောင် ကြိုးစားပြီး အတတ်နိုင်ဆုံး ကျနော်လုပ်ဆောင်နိုင်သလောက် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း “သူတို့တတွေ” ကို “သတင်းထဲက လူတွေထက် သမိုင်းထဲကလူတွေ” ဆိုပြီး ရင်ထဲက အသိအမှတ်ပြုခဲ့ခြင်းပါ။
ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ကိုပြုံးချိုတို့ ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လွှတ်လာတော့ မနက် အစောကြီး နှစ်နာရီခွဲလောက် ကျနော်ဆီကို ရှစ်ဆယ့်ရှစ် မျိုးဆက်က ကိုမာကီး တယ်လီဖုန်း ဆက်လာပါတယ်၊ “သူတို့တတွေ ပြန်လွှတ်ပြီ” ဆိုတာပေါ့။ ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်းအိမ်ကို ရောက်တော့ မနက်သုံးနာရီ ကျော်နေပါပြီ၊ ကိုမင်းကိုနိုင်တယောက် ပြည်ပ သတင်းဌာနတွေကို တယ်လီဖုန်းနဲ့ စကားပြောနေတုန်း အဲဒီပုံရိပ်ကို ကျနော် မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကိုပေါ်ဦး (သို့မဟုတ်) ကိုမင်းကိုနိုင်က ကျနော့်ကို “အယ်စိုး ငါတို့တတွေရဲ့ သန်းခေါင်ယံ လွတ်လပ်ခြင်းကွ” လို့ အားမာန်အပြည့် ပြုံးပြီး ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ ကျနော်ရိုက်ပေးခဲ့တဲ့ အဲဒီဓာတ်ပုံကိုလည်း ကိုပေါ်ဦးက အိမ်ဧည့်ခန်းမှာ ချိတ်ဆွဲထားလိုက်တာကိုလည်း ကျနော်အရမ်းကို ဂုဏ်ယူပြီး၊ စိတ်ချမ်းသာမိတာ အမှန်ပါ။
အခုလည်း တတိယ အကြိမ် “သူတို့တတွေကို” ပြန်ပြီး၊ ထိန်းသိမ်းလိုက်ပြန်ပါပြီ။ ဘယ်နေ့မှာ ပြန်ပြီး လွတ်မြောက်မလဲဆိုတာ ကျနော်မသိပါ။ ဒါပေမယ့် “သူတို့တတွေ” ပြန်ကို လွတ်လာလိမ့်မယ် ဆိုတာကို ကျနော် သံသယမရှိ အပြည့်အဝကို ယုံကြည်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော် အခိုင်အမာ ယုံကြည်ထားတာ တခု ရှိပါတယ်၊ အဲဒါကတော့ တရားမမျှတခြင်းကို တရားမျှတခြင်းက တနေ့မှာ မလွဲမသွေ အနိုင်ရစမြဲ ဆိုတာပါပဲ။
ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ တနေ့မှာ အနိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ သူတို့တတွေ အနိုင်ရရှိခြင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံက အဖိနှိပ်ခံပြည်သူ ပြည်သား များရဲ့ လွတ်မြောက်ခြင်း (သို့) အနိုင်ရရှိခြင်းပဲ မဟုတ်ပါလား။ သတင်းတွေမှာထက်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းမှာ သူတို့ တတွေ အမြဲ ထာဝစဉ် ရှင်သန်နေပြီး နေရာယူနေမှာပါ။ ။
Monday, 09 March 2009 12:38 စောထွန်း
ဂရစ်ဖစ်တက္ကသိုလ် ဂရစ်ဖစ် အာရှ အင်စတီကျု (Griffith Asia Institute) မှ အင်ဒရူးဆဲလ်သ် -Andrew Selth က ဖေဖော်ဝါရီလ ဆန်းပိုင်း နယူးဒေလီတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပဋိပက္ခလေ့လာရေး အင်စတီကျု (Institute of Peace and Conflict Studies) ၌ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံတကာ သြဇာ၏ အကန့်အသတ်များ (Burma and the limits of International Influence) ဆိုသည့် ခေါင်းစဉ်နှင့် ဆွေးနွေးရာတွင် စစ်အစိုးရနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် စစ်အစိုးရ၏ စိတ်သဘောထားကို နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း က နားလည်ရန် လိုအပ်ကြောင်းဖြင့် ပြောကြားခဲ့သည် ကို မဇ္ဈိမသတင်းစာမျက်နှာတွင်ဖတ်ရပါသည်။
ဤတွင် စစ်အစိုးရ၏စိတ်သဘောထားမှာ ဘာလဲဟူသောမေးခွန်းပေါ်လာပါသည်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားကြသည့် သတင်းမှောင်ချခြင်း၊ ပြောင်ငြင်းကွယ်ခြင်း၊ တရားမဲ့ဥပဒေများဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ယုံကြည်မှုအတွက် သာမာန်လူများ၊ ကျောင်းသားငယ်များသာမက သံဃာများကို ပါညှင်းဆဲသတ်ဖြတ်ခြင်းတို့ကို မာခီးယားဗယ်လီ၏အယူအဆအတိုင်း (ကြားနေအဖွဲ့ဆိုသည့် ကျောင်းတော်သား နိုင်ငံရေးပါတီမှပြောသလို) ရပ်တည်ချက်ထိပါးလာ၍ ပြတ်ပြတ်သားသား ဆောင်ရွက်ခြင်း ဟုသာထားမည်ဆိုလျှင်၊ မတရားစီးပွားအခွင့်အရေးယူခြင်းများကို သူလည်းလေလောကီသားပေမို့ဟု နားလည်မှု ပေးကြမည်ဆိုလျှင်၊ စစ်အစိုးရ၏ ပင်မရပ်တည်ချက်မှာ (အစဉ်အာဏာတည်မြဲရေးသာ ဟု လည်း မပြောလိုဘူးဆိုလျှင်) ဘာလဲဟု စဉ်းစားကြရန်ရှိပါသည်။ ယခုဆောင်းပါးတွင် ကျွန်တော်သိနားလည်သလောက် သူတို့ သဘောထားမှန်ကို ရှင်းပြလိုပါသည်။ ကျွန်တော်သည် စစ်သား သားသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၈၈ ခေတ် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားသူ တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါ၍ ကျွန်တော်တို့ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တိုင်း မသိရှိသေးသည့် အချက်များကို သိရှိသည်ဟု ထင်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ ဆွေးနွေးစရာ အချက်များတော့ရနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ယနေ့တပ်မတော်၏ ယုံကြည်ရပ်တည်ချက်က ဘာပါလဲ။ ၈၈ ခေတ်အထိတော့ ရှင်းလင်းစွာပင် ဦးနေ၀င်း၏ ရပ်တည်ချက်အတိုင်း ဖြစ် ပါသည်။ ကွန်မြူနစ်နှင့် ဓနရှင်ပါလီမာန်ဒီမိုကရေစီကို မယုံကြည်။ ယင်းတို့ နှစ်မျိုးကြား အလည်အလတ် သွားနိုင်မည့် လမ်းစဉ် တစ်ရပ်ကို တစ်ချိန်က ထူးချွန်သော နိုင်ငံရေးသဘောတရားဆရာများအား ရေးဆွဲစေကာ စမ်းသပ်ကျင့်သုံးကြည့်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၇ တွင် အရေးပေါ်ပါတီညီလာခံခေါ်ရသည်အထိဖြစ်သွားကာ ယင်းလမ်းကြောင်းမှ သိသိသာသာခွဲကာ မိမိသဘောကျစနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့တော့သည်။ နောက်ဆုံး ၁၉၈၅ တွင် စီးပွားရေးကျဆုံးမှုကြောင့် ခေါင်းဆောင်ကြီးတိန့်ရှောင်ဖိန်ကို အားကျကာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ စ စဉ်းစားသည်။
သို့သော် ကိုယ်တိုင်ဖျက်စီးခဲ့ပြီးသော ဗြူရိုကရေစီယန္တရားကို မထိန်းနိုင်ဖြစ်ကာ ၈၈ တွင် ပြိုကျခဲ့ရသည်။ ၈၈ ခုနှစ်က ကျွန်တော်တို့၏လှုပ်ရှားမှုသည် အင်အားပြင်းထန်တာမှန်သော်လည်း အဆိုပါ ပျက်စီးပြီး ဗြူရိုကရေစီ အဖွဲ့အစည်းကြီး လွယ်လွယ်နှင့် ပြိုမကျလျင် ထိုမျှ ခရီးမရောက်နိုင်သည်မှာ သေချာပါသည်။ ထိုအခါ ဦးနေ၀င်းက သူ့သဘော အတိုင်း နောက်ဖဲတစ်မျိုးချိုးပြီး စစ်တပ်ကို အာဏာပြန်သိမ်းစေခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က တပ်တွင်း အရာရှိများဖြစ်နေသော၊ ကျွန်တော် တို့နှင့်ကျောင်းနေဖက်မှ စစ်ထဲရောက်သွားကြသော သူတို့ကို မည်သို့လမ်းညွှန်ခဲ့သနည်း။ ထိုစဉ်က ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်တို့ ရှင်းလင်းပွဲတွေမှာ ပေါ်လွင်ပါသည်။ စစ်တပ်၏ရန်သူဖြစ်သော ကွန်မြူနစ်များကြိုးကိုင်မှု နှင့် ကိုလိုနီလက်သစ်လုပ်လိုသော (မှတ်ချက်။ အဆိုပါစကားမှာ ကွန်မြူနစ်စကားဖြစ်ပါသည်) နယ်ချဲ့နိုင်ငံကြီးများ၏ ကြိုးကိုင်မှုဖြစ်သည်ဟု သူတို့ရဲဘော်တွေကို သင်ပြခဲ့ပါသည်။ ယနေ့အထိလည်း သည်အတိုင်း သင်ကြားပို့ချဆဲဖြစ်ပါသည်။
နောက်ပိုင်း ဦးနေ၀င်းကို သူတို့ရှင်းထုတ်ပစ်နိုင်ခဲ့သော်လည်း ယနေ့ခေါင်းဆောင်များသည် ဦးနေ၀င်းကဲ့သို့ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ နှင့် စစ်အေးကာလ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး အတွေ့အကြုံရှိသူများ မဟုတ်ပါ။ စစ်အေးကာလအတွင်း ဦးနေ၀င်းကဲ့သို့ အမျိုးသားရေးနှင့် ဘက်မလိုက်ရေးဝါဒများဖြင့် ရပ်တည်နိုင်အောင် မစွမ်းနိုင်ကြပါ။ နိုင်ငံရေးကစားသည့် သီအိုရီလည်း မကျွမ်းကျင်ကြပါ။ သို့သော် သူတို့အတွက် နည်းလမ်းရှိလာခဲ့ပြီး ယနေ့ကာလ အချို့ ကမ္ဘာ့ပညာရှင်ဆိုသူများ၊ သတင်းစာဆရာကြီးဆိုသူများပင် ချီးမွန်းရလောက်အောင် နိုင်ငံရေးကို ပိုင်နိုင်သည်၊ အာဏာနိုင်ငံရေးကို ကျွမ်းကျင်သည် ဟု သုံးသပ်လာရသည့် အခြေအနေသို့ ရောက် စွမ်းဆောင်ခဲ့သည်မှာ အဓိက အကြောင်းတရား ၂ မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ပထမအကြောင်းတရားသည် သူတို့အား တွန်းပို့ပေးနိုင်သည့် တွန်းအားဖြစ်ပြီး ဒုတိယ အကြောင်းတရားသည် နည်းပရိယာယ်ဖြစ်ပါသည်။
စစ်တပ်ဝါဒ ဟု အမည်တတ်သဖြင့် ကြမ်းတမ်းစွာသုံးနှုန်းလိုခြင်း မဟုတ်ပါ။ ယနေ့ ရွေးကောက်ပွဲအထိမှန်းလာသည့် အယူအဆကို ဖြစ်စေသည့် ၀ါဒတရားဖြစ်ပါသည်။ (မှတ်ချက်၊ ဦးနေ၀င်း သည် ၁၁ နှစ်အကြာတွင် ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ခဲ့ပြီး ယခု ဦးသန်းရွှေက ၂၂ နှစ်ကြာမှ လုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။) ဦးနေ၀င်း၏ စစ်သည်တော်ကျင့်ဝတ်တွင် စတင်ခဲ့သော ၀ါဒဖြစ်ပါသည်။ စစ်တပ်အတွင်း မည်သည့်ပုံစံဖြင့် ၀င်လာသည်ဖြစ်စေ စည်းကမ်း (ဤတွင် အမိန့်နာခံမှုကို ၄င်းတို့က စည်းကမ်းဟုခေါ်ပါသည်) ကျနအောင် ပုံသွင်းပေးလိုက် ပါသည်။ ငယ်စဉ်က လမ်းစဉ်လူငယ် စစ်ရေးပြ သင်တန်းဆင်း ကျွန်တော့်ကို အကိုဝမ်းကွဲ စစ်ဗိုလ်က မေးဘူးပါသည်။ “ညီလေး စစ်ရေးပြဆိုတာ ဘာလုပ်တာလဲ မင်းသိလား” ကျွန်တော်က စည်းကမ်းကျအောင်သင်ပေးတာ ထင်ကြောင်း ပြောသောအခါ “မဟုတ်ဘူးကွ၊ အဲဒါ အမိန့်ကို မစဉ်းစားပဲနာခံတတ်အောင် ပုံသွင်းပေးတာ။ သတိ သက်သာ အေးစေ ပြောတဲ့အခါ မင်းက မစဉ်းစားပဲ ချက်ခြင်း လုပ်လိုက်တယ်မဟုတ်လား။ ဒီ လို ဘာမှမဟုတ်တဲ့ အပြုအမူလေးကစပြီး မစဉ်းစားတဲ့အကျင့် သွင်းပေးတဲ့အခါ ရှေ့တန်းမှာ “တက်” လို့ အမိန့်ပေးတဲ့အခါ မစဉ်းစားပဲ တက်တဲ့အကျင့်ရသွားတာပေါ့” စာဖတ်နာသော ကျွန်တော့် အကိုသည် စစ်တပ်ထဲမှာ ရာထူးသိပ်ကြီးကြီးမရပါ။ ရှင်းပါသည်။ သို့သော် ထိုစဉ်က ၁၈ နှစ်သား ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဖြစ်လာသည့် ကျွန်တော့်အတွက် ပညာရပါသည်။
စစ်ရေးပြဖြင့် ပုံသွင်းပြီးနောက်ပိုင်း ပင်ပန်းမှု၊ အနားမနေရမှုတို့ကို ဆက်လက်ပို့ချပါသည်။ fatigue ခေါ် အားလတ်ချိန်မရအောင် ထားသော အလုပ်များကို ဆက်တိုက်ခိုင်းပါသည်။ ကျွန်တော့် မိခင်ဖြစ်သူသည် အိမ်ဖော် အပျိုရွယ်လေးများ ထားသည့်အခါ တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုးခိုင်းသောကြောင့် ကျွန်တော်က မေးဘူးပါသည်။ အမေက “ဒီအရွယ် အားနေရင် တောင်စိတ် မြောက်စိတ်တွေ ၀င်တတ်တယ် သားရဲ့ ဒါကြောင့် မအားအောင် တမင်ရှာခိုင်းရတာ” ဟုပြောပြပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် စိတ်ရောလူပါ မလွတ်လတ် အောင် ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သည်နောက်မှာတော့ ရှေ့တန်းထွက်ခြင်း၊ (မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မသိပဲ) စစ်ပွဲဆင်နွှဲခြင်း၊ တို့တွင် မိမိရဲဘော်များ မိုင်းထိ၍ ခြေပြတ်လက်ပြတ်ဖြစ်ရခြင်း၊ သေဆုံးရခြင်း၊ ရန်သူက သတ်ဖြတ်ခြင်း တို့ဖြင့် ဆက်လက် သင်ကြားပို့ချပေးပြန်ပါသည်။ နောက်ဆုံးအဖြေတစ်ခုသို့တွန်းပို့ပါသည်။ ယင်းသည် ဆိုခဲ့သော “စစ်တပ်ဝါဒ” ဖြစ်ပါသည်။ ရှင်းအောင်ဆိုရလျှင်
(ဘာကြောင့်မှန်းမသိပဲ ဖြစ်သွားသော) ရန်သူကြောင့် မိမိတို့ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေ ထိခိုက်သေဆုံးရသည်။
ထိုအချိန်တွင် သာမာန်ပြည်သူများ၊ ၀န်ထမ်းများ (ယင်းတို့စကားအရ “အရပ်သားများ”) သည် သက်သက်သာသာ နေရသည်။ အသက်စွန့်ရန်မလို၊ စည်းကမ်းမရှိ၊ အားလတ်ချိန်တွေ အပြည့်ရှိနေသည် ။ စီးပွားရေးလုပ်ပြီး ချမ်းသာနေသည် … ဟူသော အတွေးကို ဆက်တိုက် ပို့ချပေးပါသည်။ ထိုသို့သော အနစ်နာခံမှုများကြောင့် သူတို့တွင် “နိုင်ငံတော်အာဏာ” ကို သုံးပိုင်ခွင့်ရှိသည် ဟု အဖြေထုတ်ပေးပါသည်။
ပြည်သူလူထုနှင့် စစ်တပ်အတွင်းအကြီးမားဆုံး အတားအဆီးသည် အဆိုပါအတွေးအမြင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော် ပညာရှင်ဘ၀ စစ်တပ်နှင့် တွဲ၍ တောထဲတောင်ထဲသွားရသည့်အခါ စစ်ဗိုလ်တွေ အင်မတန်အံ့သြကြပါသည်။ သူတို့မှလွဲ၍ မြို့ပေါ်တွင် တိုက်ပုံ ၀တ်နေသော လူပျော့များ ဤသို့ အပင်ပန်းခံနိုင်မည်၊ အပင်ပန်းခံအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟု မထင်ခဲ့ကြပါ။ အင်္ဂလန်မှ ဘွဲ့ထူးတွေ ရလာသည့် ဆရာဝန်ကြီးသည်လည်း ညလာနှိုးလျှင် ထလိုက်ရမှန်း ဂျူတီယူရမှန်းသူတို့မသိကြပါ။ (အစပိုင်းတွင် မသိကြပါ၊ နောက်ပိုင်းရာထူးရလာတော့လည်း မသိချင်ကြတော့ပါ)။ တစ်နှစ်က တက္ကသိုလ်ဆရာမလေးတစ်ဦး ကျောင်းသားများနှင့် ကွင်းဆင်း ခရီးထွက်လာစဉ် လက်နက်ကိုင်လက်ချက်နှင့် ကွယ်လွန်ပါသည်။ ၀န်ထမ်းတိုင်း၊ ပြည်သူတိုင်း မှာ လက်နက်မဲ့ သက်စွန့်ဆံဖျား မှုတွေ ပြည့်နေကြောင်း သတိမထားမိကြပါ။
နောင်တစ်ချိန်တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူများအားနှိမ်နင်းသည့်အခါ နိုင်ငံတကာက ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းချခံရခြင်း ဟုမြင်သော်လည်း သူတို့လို ပင်ပန်းစွာအလုပ်မလုပ်ရပဲ အခွင့်အရေးတောင်းသူများဟု ဆက်လက်မြင်လာပါတော့သည်။
သည်ထက် ပိုကြီးသည့် စစ်တပ်ဝါဒတစ်ရပ်မှာ နိုင်ငံခြားသားကို အထင်ကြီးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားသားမုန်းတီးခြင်း (xenophoebia) သည် အထင်ကြီးရာမှ ကြောက်လန့်မုန်းတီးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသည် မိမိတို့ ကြိုးစားသော်လည်း တိုးတက်မှု မရလာသည့်အခါ ကြီးသောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်လာပါသည်။ နိုင်ငံခြားသားကို ပိုမို အလုပ်လုပ်သူ၊ ပိုမို ဥာဏ်ကြီးသူ ဟုမြင်ပါသည်။ ပြည်ပတွင် တိုးတက်ခြင်းသည် ယင်းလူမျိုးများ အလုပ်လုပ်၊ ဥာဏ်မြင့်သောကြောင့်ဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည် မတိုးတက်ခြင်း မှာ စစ်တပ်တစ်တပ်လုံး အလုပ်လုပ်သော်လည်း ပြည်သူတွေ၊ ၀န်ထမ်းတွေ အလုပ်မလုပ်သောကြောင့် မတိုးတက်ခြင်းဟုမြင်လာပါသည်။ သည်အတိုင်းလည်း သင်ကြားပေးပါသည်။ သာမာန်ပြည်သူတွေမှာတော့ နိုင်ငံခြားသွားအလုပ် လုပ်ကြသည့်အခါ နိုင်ငံခြားသားကို သူလိုကိုယ်လို ဟုသာမြင်ပါသည်။ အလုပ်လုပ်သလောက်အခွင့်အရေးရသဖြင့် အလုပ်လုပ်ကြ သည်။ စည်းကမ်းရှိသလောက် စည်းကမ်း၏အကျိုးကို ခံစားရသဖြင့် စည်းကမ်းနှင့်နေကြသည်။ သူတို့လို ကိုယ်လည်း အခွင့်အရေး ရရင် ကိုယ့်တိုင်းပြည်လည်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်းနားလည်ကြသည်။ ကြီးမားသော အတွေးအခေါ်ကွာဟမှုကြီးဖြစ်ပါသည်။
ထိုမှတစ်ဆင့်တိုးသောအခါ စစ်တပ်က ပိုအလုပ်လုပ် အနစ်နာခံရတဲ့အတွက် အခွင့်အရေးယူထိုက်သည်ဟု မြင်လာပါတော့သည်။ နိုင်ငံရေးသမားများအား နိုင်ငံတော်အာဏာကို ဖြတ်လမ်းနည်းဖြင့် ရယူလိုသည်ဟု စွတ်စွဲပေးလိုက်ပါသည်။ တပ်ထဲတွင် နေခဲ့သော ငယ်စဉ်က ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သည် အမိန့်နှင့် အာဏာကို ယုံကြည်ပါသည်။ နောင် ၈၈ ခေတ်ကိုကျော်မှ စည်းရုံးရေးကို ယုံကြည် လာပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်က ပုံသွင်းပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် စည်းရုံးရေးကို ယုံကြည်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း သည် အမိန့်နှင့် အာဏာကို ယုံကြည်ခဲ့ခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ အမွေဖြစ်ပါသည်။
အထက်ပါ စစ်တပ်ဝါဒ သည် နိုင်ငံတကာ၊ ဘာသာတရားနှင့်၊ နိုင်ငံရေးသဘောတရားများ သိရှိနားလည်လာသည့် အရာရှိကြီး များဖြစ်လာသည့်အခါ မိမိတို့၏ အထက်ပါ ကျင့်ထုံးများနှင့် ဆန့်ကျင်ဆုံးဖြတ်မှုတိုင်း၊ အဖြေတိုင်းအတွက် စိတ်ဖြေစရာ ဆေးကောင်း ကြီး တစ်ခွက်ဖြစ်လာပါတော့သည်။ ယနေ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံး ဤအတိုင်း ယုံကြည်ကြသည်မှာ မှားယွင်းဖွယ် မရှိပါ။
ဦးနေ၀င်းအားဖယ်ရှားပြီးသည့်အခါ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအတွက် လမ်းကြောင်းချပေးမည့်သူမရှိတော့သလောက်ဖြစ်ပါသည်။ (ထိုမတိုင်ခင် အာဏာသိမ်းပြီးကာလက ဒေါက်တာမောင်မောင်နှင့်တကွ ပါတီခေတ်ခေါင်းဆောင်များ Policy နှင့် လမ်းညွှန်မှုများ ချပေးခဲ့ပါသည်။) သို့ရာတွင် အတန်အသင့် အမြင်ကျယ်သူ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်သည် မဟာဗျူဟာလေ့လာရေးဌာနကို (အမေရိကန်ပုံစံအတိုင်း) ထူးထောင်ကာ ပညာတော်သော စစ်ဗိုလ်ငယ်များမှအစ ခေါင်းခေါက်ရွေးယူ၍ ထောက်လှမ်းရေးဌာနချုပ် တွင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးအလိုက် အထူးပြုတာဝန်အမျိုးမျိုးဖြင့် လေ့လာ လေ့ကျင့်စေခဲ့သည်။ အမေရိကန်နှင့် အီးယူ၊ ဂျပန် တို့သို့ နိုင်ငံရေးအောက်လမ်းနည်းများဖြင့် ချဉ်းကပ်ခဲ့သည်။ စစ်အစိုးရ၏ လမ်းပြမြေပုံ နှင့် နေပြည်တော်စီမံကိန်း၊ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး တက္ကသိုလ်ခေါ် ပေါ်လစီ စီမံကိန်းများကို သူ၏ ဦးခေါင်းများဖြင့် ဆွဲယူခဲ့သည်။
နောင်တစ်ချိန် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်မရှိသောအခါ စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်များအတွက် နမူနာပေါင်းများစွာ၊ စကားလုံးပေါင်းများစွာ (ယနေ့နောက်ဆုံးပေါ် - ရိုဟင်ဂျာမဟုတ်၊ ဘင်္ဂါလီ ဆိုသည့် စကားလုံးမျိုးအထိ) အရန်သင့်ရှိထားပြီဖြစ်သည်။ ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ်တွင် အရည်အချင်းရှိသော ပညာတတ်ဗိုလ်မှူးကြီးများ၏ သုတေသနကျမ်းများ ရှိနေသည်။ ဒီပဲယင်း အရေးအခင်းကို “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အန္တရာယ်ကာကွယ်ရေး” ဟူသော သုတေသနစာတမ်းအတိုင်း ဖန်တီးခဲ့သည်။ UN ကိုယ်စားလှယ် ဂန်ဘာရီမလာမှီ ပြည်တွင်းတာဝန်ခံကို မောင်းထုတ်ပြခြင်း၊ ယင်းမှတစ်ဆင့်ချင်းရှေ့တိုးလာပြခြင်း၊ အမေရိကန် စစ်ရေယာဉ်မ၀င်နိုင်မှီ အာဆီယံ၊ UN တို့နှင့် အစည်းအဝေးလုပ်ပြခြင်း စသည်ဖြင့် နည်းဗျူဟာမျိုးစုံကို အသစ်ဖန်တီးယူခြင်း ထက် ဦးနေ၀င်းလုပ်ခဲ့သည့် ခြေလှမ်းများကို အနီးစပ်ဆုံး ပုံတူကူးချခြင်းများဖြစ်သည်။ ကွန်မြူနစ်၊ ဆိုရှယ်လစ်တို့ကို မယုံကြည် သော်လည်း ထို ၀ါဒကျင့်သုံးသူ တို့၏ နည်းပရိယာယ် လုပ်နည်းလုပ်ဟန်များကို လေ့လာကြသည်။ ဤသည်မှာလည်းမဆန်း၊ မဆလခေတ်တွင်သူတို့ ကြီးပြင်းလာကြပေရာ (တစ်နည်းအားဖြင့် လူရာဝင်လာရပေရာ) ထိုခေတ်က သင်ကြားခဲ့သော နိုင်ငံရေးသမား မုန်းတီးရေးတရားများ၊ ဦးနု မကောင်းကြောင်းများ၊ ပါတီစုံနှင့် ဖက်ဒရယ်မူ မကောင်းကြောင်းများ သည် အသည်းတွင် စွဲထင်နေပေပြီ။ ထိုခေတ်တလျှောက်လုံး ဖတ်စရာနိုင်ငံရေးစာအုပ်ဆို၍ လက်ဝဲစာပေသာရှိရာ ထို စာပေတို့မှ လက်ဝဲ၀ါဒ တော်လှန်ရေးသမားတို့၏ ကောင်းကွက်များ အယူအဆကောင်းများကို အရမယူနိုင်သောအခါ မကောင်းသော လုပ်နည်းလုပ်ဟန်များကိုသာ ကူးယူရပေတော့သည်။ “ဆန့်ကျင်ကြ၊ ဆန့်ကျင်ကြ” ဆိုသည့် လက်မောင်းတန်းအော်ဟစ်မှု များကို သူတို့ရိုက်သောရုပ်ရှင်ထဲမှ အလံနီတို့ထံမှအရယူသည်။ ကျွန်တော့်နားထဲတွင် “သတ်ပစ်၊ သတ်ပစ်” ဆိုသည့်အသံများ ကြားယောင် မိရသည်။
အရေးအခင်းပြီးကာစက အားလုံးသပိတ်မှောက်ပြီး ဖြစ်နေသည့် ၀န်ထမ်းများဖြင့် မည်သို့ဆက်လက်အုပ်ချုပ်မည်နည်းဟု ကျွန်တော်တို့တွေးခဲ့ဘူးသည်။ တစ်ပြည်လုံးသပိတ်မှောက်လျင် တိုင်းပြည်ကို အုတ်တံတိုင်းခတ်ရုံပေါ့ဟု ပြောခဲ့ကြသည်။ သို့သော် အာဏာမသိမ်းမီတွင် မော်စီတုန်း၏ နည်းလမ်းတစ်ခုကို ကျွန်တော်ဖတ်မိသည်။ ယင်းမှာ “အစွန်းရောက်လူနည်းစု ကို တိုက်ရိုက်နှိမ်နင်းခြင်း၊ အလတ်တန်းစားလူများကို တွေဝေယိမ်းယိုင်စေခြင်း နှင့် နောက်တန်းက လူုထုကြီးကို မိမိ လူဟု အမည်တတ်ခြင်းဖြင့် တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲယူခြင်း” လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ ကူးယူတတ်သော စစ်အုပ်စုသည် ထိုအတိုင်း တသဝေမတိမ်းကျင့်သုံး ပါသည်။ ယနေ့တိုင်လည်း ပြည်တွင်းသာမက ပြည်ပနိုင်ငံများအထိပါ တိုးချဲ့ယူလာရာ အာဆီယံသည် ထိုလမ်းစဉ်မှ အလယ်အလတ်တန်း စားအုပ်စုဖြစ်လာပါသည်။ အတိုက်အခံထဲမှလည်း အဆိုပါ အလယ်အလတ်တန်းအုပ်စုကို ဆွဲယူနေပါပြီ။ တွေဝေသော (ကွန်မြူနစ်စကားဖြင့် ဆက်ပြောလျှင် ပညာတတ်များ) လူတချို့သည် ပါတီဖွဲ့အရွေးခံရန်၊ ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံရန် လမ်းစဉ်ကို ရွေးနေကြလေပြီ။ စစ်တပ်သည် သာမာန်အားဖြင့် ကျောင်းသားများကို မထလာအောင် နှိပ်ကွက် ထားလိုသည်မှအပ နိုင်ငံရေးသမားများ လောက် အမြင်မကြည်မှုမရှိသည်ဖြစ်ရာ (သူတို့သင်ခဲ့သော ဦးနေ၀င်းခေတ် သမိုင်းစာအုပ်များတွင်လည်း ကျောင်းသားများ အမြင်မှား၍သာ နိုင်ငံရေးလုပ်ကြကြောင်း သင်ခဲ့ရရာ) ကျွန်တော်တို့ ၈၈ ကျောင်းသားများကိုလည်း အလယ်အလတ် လူစုတွင်ပါဝင်မည်လားဟု ထင်ကာ လွှတ်ပေးထားခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ တွင်မှ အစွန်းရောက်စာရင်း သို့ ထည့်သွင်းခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ခြုံငုံ၍ဆိုရလျှင် စစ်တပ်၏ မကောင်းမှုများကို နားလည်မှုပေးသည့်တိုင် ယင်းတို့၏ ရပ်တည်ချက် သဘောထားသည် မှားယွင်းစွာ သင်ကြားလာသော အခြေခံအပေါ်မှ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းသူပြည်သားများ အမှန်တကယ်ခံစားမှု၊ အမှန်တကယ် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြပြီး အကျိုးမရကြမှု၊ ယင်းတို့ အထင်ကြီးသော ပြည်ပနိုင်ငံသားများကဲ့သို့ အရည်အချင်းရှိသူများစွာ ရှိနေမှု၊ ယင်းတို့ကဲ့သို့ ပင်ပန်းနွမ်းနွယ်စွာ၊ သက်စွန့်ဆံဖြား တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်လုပ်နေသူများရှိနေမှုတို့ကို ယနေ့တိုင် သိမြင်လာကြခြင်း မရှိသေးပါ။ ပြည်သူလူထုနှင့် အမှန်တကယ် နီးနီးစပ်စပ် နေထိုင်လိုစိတ်၊ နားလည်အောင်လုပ်လိုစိတ် နည်းပါးအောင် ကြိုတင် လေ့ကျင့်ပေးထားခြင်းဖြင့် အရပ်ဖက်တာဝန်ယူရသည့်တိုင် အစဉ်ကင်းကွာ နေလေ့ရှိသည်။ နားလည်သွားသော အရာရှိများသည်လည်း ဘေးဖယ်ခြင်း ခံသွားကြရသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ယနေ့ခေတ် ပင်စင်ယူသွားသော စစ်ခေါင်းဆောင်အားလုံးသည် လက်ရှိစစ်တပ်၏ ဘေးဖယ်ခြင်းကို ခံကြရသည်ဖြစ်ရာ လက်ရှိခေါင်းဆောင်ကြီး များ တသက်တာ မည်သည့်အခါမျှ အငြိမ်းစားမယူရဲတော့သည့်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိကုန်ကြခြင်းဖြစ်ပေသည်။
၇ရက်ဇူလိုင် ၂၀၀၇ မနက်၃နာရီမှာ ပင်လယ်စာ စက်ရုံမှ အချိန်ပို အလုပ်ဆင်းပြီး အတူတူ ပြန်လာတဲ့ မြန်မာမိန်းကလေး
၅ယောက်ကို ဒေသခံ ရဲကပါမနိုင်လို့ လက်လျှော့ထားရတဲ့ ထိုင်းမာဖီယား ဂိုဏ်းဝင် ၁၀ ယောက်က လိုက်
လံဖမ်းဆီး ရာမှာ ၄ယောက်ထွက်ပြေး လွတ်မြောက် သွားပြီး အလုပ်သမားလက်မှတ်တရားဝင် လက်ဝယ် ရှိသူ အသက်
၂၂နှစ် အရွယ် မိန်းကလေး တစ်ယောက် အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ သူမကို ဖမ်း မိရာ လယ်ကွင်း ထဲမှာပင် အဓမပြုကျင့် ခဲ့ကြ
ပြီးနောက် သူတို့ဂိုဏ်း တည်ရှိရာ တိုက်သို့ ခေါ်ဆောင် သွားကာ ကျန်ဂိုဏ်သားလေးယောက် က ထပ်မံ စော်ကားကြပြန်
သည်။သူမသည် ၈ရက် ဇူလိုင်တွင် အားကုန် ကြိုးစားပြီး ၄ထပ်တိုက်ပေါ်မှ ခုန်ချပြီးထွက်ပြေး လွတ်မြောက် လာခဲ့ရာ မ
ဟာချိုင် ခရိုင်ရှိ ဇီဝိချိုင်ဆေးရုံတွင်တက်ရောက် ဆေးကုသ ခံနေခဲ့ ရသည်။ သူမကို ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်ခဲ့ရာ တိုက် ခန်း
တွင် မိန်းကလေး အယောက် ၂၀ ခန့်လည်း ဖမ်းဆီးခံ ထားရ ကြောင်း၊ သူမအဖမ်းခံထားရ ချိန် တိုတောင်း သောကြောင့်
ထိုမိန်းကလေးများ မည်သည့်လူမျိုးများဖြစ်သည်ကို မသိခဲ့သော်လည်း အ များစု မှာ မွန်နှင့် မြန်မာမ လေးများဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုမိန်းကလေးများ အားလုံးကို အ၀တ်ဆင် မပေး ထား ကြောင်း၊ထိုမိန်းကလေးများနှင့် သူမကို လိင်စိတ်ကြွဆေးများ
အတင်း တိုက်ကျွေးပြီးလူမဆန်စွာ အနိုင်ကျင့်ခဲ့ကြောင်း၊ အနိုင်ကျင့်ရင်းလည်း နင်တို့ ခွေးမတွေငါတို့က နင်တို့ မွန်နဲ့
မြန်မာတွေကို ခွေးလောက်ပဲ သဘောထားတယ် စသည်ဖြင့်ရိုင်းစိုင်းလွန်းစွာ ပြောဆို ကြိမ်းမောင်း ခဲ့ကြောင်း၊ နင် တို့ကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးရင် လှေတွေဆီ ရောင်းစားမှာ ဟုလည်း ပြောခဲ့သေးကြောင်းရဲသို့အကြောင်း ကြား ခဲ့သော်လည်း
မည်သည့် အရေးယူမှုမှ မပြုလုပ် ခဲ့ကြောင်းသတင်းကြား သိရပါသည်။
မဟာချိုင်ဒေသသည် ပင်လယ်စာ ထုပ်ပိုးပြင်ဆင်သော စက်ရုံများ ထွန်း ကား ပြီးစက်ရုံပိုင်ရှင် သူဌေး များသည် ကိုယ်
ပိုင် ငါးဖမ်း စက်လှေ များလည်းရှိလေ့ရှိကြပြီး ငါးခိုးဖမ်းလှေလည်း များစွာ ပိုင်ဆိုင် လေ့ရှိကြ သည်။
ထပ်မံ စုံစမ်းချက်များအရ ထိုမိန်းကလေးများကို ပင်လယ်တွင်း ငါးဖမ်းစက်လှေများ တွင် လှေသားများ ပိုမို အလုပ်လုပ်
ချင်စေရန် ပျော်ပါးရန် အပြီးရောင်းစား ပေးလေ့ ရှိပြီး ထို လှေ သား များကလည်း စိတ်တိုင်းကျပျော်ပါးပြီးသောအခါ ၀န်
ဆောင်မှု မပေးနိုင် တော့သော ထို မိန်းက လေး များကိုကိစ္စ လက်စဖျောက် ပင်လယ်တွင်း ပစ်ချခဲ့ လေ့ရှိ ကြောင်း၊ အ
ဆိုပါ လူမဆန် သောအကြမ်းဖက် လူ ကုန်ကူးမှု တွင် ထိုင်း ရဲများ ကိုယ်တိုင် တရားမ၀င် ပါဝင်ပတ်သက် နေကြောင်း
သိရှိ ရသဖြင့် မခံမရပ်နိုင် ဖြစ်ပြီး ထိုကိစ္စများကိုအဓိကထား ကူညီသော Pavena foundation သို့ အကြောင်းကြားခြင်း၊
ထိုင်းစစ်ထောက်လှမ်းရေးသို့ တိုင်ကြားခြင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန သို့ တိုင်ကြားခြင်း၊ ထိုင်း လူဝင်မှု ကြီးကြပ်
ရေး ရဲဌာနသို့တိုင်ကြားခြင်း အစရှိသည် တို့ကို ဆက် တိုက် ဆောင်ရွက်ရာ အရေးယူမှုစတင်ခဲ့ပါသည်။ လူဆိုးများ
ထွက်မပြေး နိုင်ရန် ၊ ထိုမာဖီးယားဂိုဏ်းတည်ရှိရာ ဌာနချုပ်ကို ရဲများက ၀န်းရံထား နေ စဉ် ဘီဘီစီ သတင်း ဌာနမှ
သတင်းကြေညာ ခဲ့သဖြင့် ဓားစာခံ ထိုမိန်းက လေး များ၏ အသက် အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရမှုအတွက်ရော၊ မာဖီးယား ဂိုဏ်း
ချုပ်နဲ့ ဂိုဏ်းသားများကို ထွက်ပြေးခွင့်ရအောင် သတင်းပေးသလို ဖြစ်ခဲ့ သည့် အတွက် ကြောင့်ပါ သက်ဆိုင် ရာလှုပ်
ရှားသူများ က အလွန်စိတ် ဆိုး နေခဲ့ကြ ပါသည်။
ထို့ပြင် နာမည်သာလိုချင်ပြီး ခေါင်းရှောင်တတ်သော တာဝန်ရှိသူများ ကြောင့်ဇူလိုင် ၁၃ရက် ထိ ထို မာဖီးယား ဂိုဏ်းကို
သူစီးနိုး ငါစီးနိုး နှင့်ဝင်မဖမ်းရဲဘဲ ဖြစ်နေရာ မနေနိုင်သော မြန်မာအချို့ကြောင့် ဂိုဏ်းဝင်၃ယောက်ကို လိုက်လံဖမ်းဆီးရာ
ထို၃ယောက်ကို ဒေသခံရဲတစ်ဦး၏ နေအိမ်ဟောင်းအတွင်း တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး ထိုအရေးကို လိုက်လံဖော်ထုတ်ကူညီ
သူ မြန်မာတစ်ဦး၏ နေအိမ်ကိုဖောက်ထွင်း ခံခဲ့ရပြီး နောက်တစ်ဦး၏ချွေးမဖြစ်သူ အသတ်ခံခဲ့ရပါသည်။
ဖောက်ထွင်းသူသည် တအိမ်လုံး အ ပြောင် သိမ်းသွားရာ လက်ကိုင်ဖုန်းပါပါသွားပြီး ထိုလက်ကိုင်ဖုန်း နံပါတ် ကို ဆက်
သွယ်ရာတွင် ဖောက်တာငါပဲ..ဘာလုပ်ချင်လဲ.. ဘာဖြစ်ချင်လဲ စသည်ဖြင့် ပြန်လှန် ခြိမ်းခြောက်သွားကြောင်း သတင်း
ရရှိပါသည်။ ထို့ပြင် ဆက်ကြေးငွေ ပေးထားသောကြောင့်ဖမ်းရိုးမရှိသော နယ်တွင် လက် မှတ် မရှိဘဲ တရားမ၀င်အ
လုပ်လုပ်သူများကိုဖမ်းသည် ဟုဆိုကာ အိမ်ခန်းများအတွင်း ဓာတ်ငွေ့သုံး ပြီး အတင်းဖမ်းဆီးမှုကိုထူးခြား တိုက်ဆိုင်
စွာ ပထမဆုံး ဖမ်းဆီးမှု ပြုခဲ့ရာ တမင် လက်စားချေဖမ်းဆီးခြင်းဟု မြန်မာများက သတ်မှတ် အခဲမကြေ ဖြစ်နေကြပါ
ထို့ကြောင့် မြန်မာ့အရေး ဆောင်ရွက်သူများက နောက်ဆုံး ကြိုးစားသည့်အနေဖြင့် Pavena foundation သို့ဆက်
သွယ်တိုင်ကြားခဲ့ရာ ထိုအသင်း မှတည်ထောင်သူ ကိုယ်တိုင် ထိုင်းရဲချုပ်သို့ တိုက်ရိုက်စာတင်အရေးယူမှုပြုလုပ်ပေး
ခြင်း၊ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက် တိုင်ကြားသူ မြန်မာမိန်းကလေးကိုလည်း အန္တရာယ် ကင်းစေရန် ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်
ပေးထားခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအသင်းရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုကြောင့် နောက်ထပ် မာဖီးယားဂိုဏ်းသား ၄ ယောက်
ကို ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း နောက်ထပ်လည်းလိုက်လံဖမ်းဆီးမှုများကို ထိထိရောက်ရောက် ပြုလုပ်ပေးနေကြောင်း
ရုပ်မြင်သံကြား မှ ထုတ်လွှင့်ကြေညာခဲ့ရာ သတင်းကြားသိရသဖြင့် ပါဗီးနား အသင်းကြီးကိုလွန်စွာ ကျေးဇူး တင်ဖွယ်ရ
သို့သော် စေ့စပ်သေချာလိုသူ မြန်မာပညာတတ် အလုပ်သမားများကကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ဆက်လက် စုံစမ်းရာ
ထိုအဖမ်းခံထားရသော ၄ယောက်မှာထိုးကျွေးခံ ဘာအဆင့်မှ မရှိသော သူများဖြစ်ပြီး ထို မာဖီးယားဂိုဏ်းတွင်အမှန်တ
ကယ် ထိပ်ပိုင်းမှ လူများမှာ ထိုင်းနိုင်ငံရှိထိုဒေသရှိထိပ်တန်းအာဏာပိုင် များ ဖြစ်နေပြီး ထိုဂိုဏ်းသည် အတော်ကိုအင်
အားကြီးမား သည်ကို တွေ့၇လေသည်။ ထိုမျှမကသေး ဘဲ မိန်းကလေးတစ်ဦးထွက်ပြေး လွတ်မြောက် ခဲ့ရာ တိုက်ခန်း
တွင် ကျန်ရစ်ခဲ့သူ မိန်းကလေး ၂၀ယောက် မှာ လုံးဝ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီး ကျန် မာဖီးယားဂိုဏ်း သားများကိုလည်း
ရှာမတွေ့တော့ပေ။ ဖမ်းမိသူ ၄ယောက်မှလည်း သူတို့လေးယောက်သာထိုမိန်းကလေးကို ဖမ်းသည်ဟု ၀န်ခံပြီး အမှု
မှန် ကို ကွယ်ဝှက်သေးသိမ်စေခဲ့သည်။ လာမည့် ဇူလိုင် ၁၄ရက်နေ့တွင် အဆိုပါ လေးယောက်ကိုရုံးထုတ်မည် ဖြစ်ရာ
ထိုင်းများ၏ ကူညီမှုသည် နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်ရန်သက်သက်သာ ဖြစ်ပြီး အမှုမှန်ကို သေးသိမ် ကွယ်ဝှက် သလို
ပင်လယ်စာ လုပ်ငန်းသည် ထိုင်း နိုင်ငံ၏ အဓိက နိုင်ငံခြားပို့ကုန် ဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်း ထုတ်ကုန်ကို ဒေါ်လာ
သန်းထောင်ချီ ထောက်ပံ့နေသောလုပ်ငန်းဖြစ်ရာ ထို လုပ်ငန်းအတွက် မြန်မာမိန်းကလေးများကို သည်လို လူမဆန်
လွန်းစွာ အသုံးချပြီး လှေသမားများကို ပျော်တော် ဆက်စေပြီး သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ ကိုယ်တိုင်က တိုင်ကြားမှုကို ဂရုမ
ပြုဘဲ သည်လို မသိချင် ဟန်ဆောင်ကာဖုံးဖိမှုကို ကန့်ကွက်သည့် အနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှ တာဝန်ရှိသူများကိုတွန်းအား
ပေးရန် အတွက်သက်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ များ၊အဖွဲ့အစည်းများမှ လည်းကောင်း မြန်မာ့လူမျိုးရေးကို
စိတ်ဝင်စား စာနာသောပြည်ပရောက် မြန်မာများမှလည်းကောင်း online petition များကိုပြင်ဆင်ကန့်ကွက်
တွန်းအားပေး တောင်းဆို ပေးကြပါရန် ပန်ကြားအပ်ပါသည် ။